तुहिन लाग्यो लोकतन्त्र
कस्ले सुन्छ आमाको चित्कार ?
कस्ले देख्छ आमाको बलत्कार ?
स्पर्श गर्न सक्छ को आमाको घाउ ?
यहाँ लोकतन्त्र पनि तुहिन लाग्यो ।
आमा कसरी तिम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने ?
कसरी तिम्रो आत्मविश्वास बलियो पार्ने ?
अँग अँगमा यौवनको आँकुरा कसरी फुलाउने ।
जुन वादी आए पनि कानुन फेरिने
भाग बण्डा लगाउंदै नीति नियम फेरिने
यस्तै छ हाम्रो परम्परा यसलाई कसरी सुधार्ने ।
महिषासुरको जमात बढिरहेछ दिन दिनै
महत्वाकाँक्षाको लहरमा लहराउनेहरु
माटोमा मिल्ने शरीरमा अत्तर हाल्न रुचाउनेहरु
आफै आफैमा रक्त पिपासु भइसके ।
नयाँ युगमा प्रवेश गरेका हामी
कतै देखिदैन नयाँ युगको लक्षण
उस्तै छिन मेरी आमा
उहि पिडा दुखमा छटपटाइरहेकी ।
आऊ हामी सबै एकजुट भई खबरदार गरौं
देवहरुलाई छानी दानवहरुको नास गरौं
तुहिनबाट बचाऔं कलिलो लोकतन्त्रलाई ।